Luulyo | 2016 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2016
Degmada Yaaqshiid oo Caawa Kooxo Hubeysan ay Dil ka geysteen
Luulyo 31, 2016
WAAJIDPRESS – 31 JUL 2016:
Caawa ayaa Koox hubeysan ay ku dileen degmada Yaaqshiid mid ka mid ah Gudoomiyeyaasha waaxyaha degmadaasi.
Gudoomiyaha waaxeedka ayaa la sheegay in ay dileen labo dhalinyaro ah oo bastoolado ku hubeysnaa ay ku dileen degmada Yaaqshiid, kuwaas oo goobta ka baxsaday markii ay dilka fuliyeen.
Ciidanka dowladda iyo maamulka Degmada Yaaqshiid ayaa waxa ay gaareen goobta uu dilka ka dhacay, iyagoo halkaasi ka wada baaritaano ku aadan sida uu u dhacay dilka.
Dilka Gudoomiye waaxeedkan ayaa qeyb ka noqonaya dilal mudooyinkii u dambeeyay magaalada Muqdisho loogu geysanayay qaar ka mid ah Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dad shacab ah.
War deg deg ah: Qarax kale oo hadda Muqdisho ka dhacay
Qarax xoogan ayaa waxaa goordhow ka dhacay Isgoyska debka ee magaalada Muqdisho, kaasi oo la sheegay inuu ahaa mid lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah.
Qaraxa ayaa waxaa lagu soo xiray gaari uu la socday mas’uul ka tirsanaa dowlada kaasi oo Qaraxa uu kasoo gaaray dhaawac culus.
Gaariga oo lagu soo xiray miino ayaa waxaa ku dhaawacmay wadihii waday iyo sidoo kale dad goobta ka agdhawaa sida ay kusoo waramayaan goobjoogayaal.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay in shaqsigii watay gaariga uu soo gaaray dhaawac culus islamarkaana loo qaaday goobaha caafimaadka.
Goobta Qaraxa ayaa waxaa iminka buux dhaafiyay ciidamada amaanka waxaana sidoo kale xiran Isgooyska debka oo ah halka uu gaariga ku qarxay.
Akhriso then DAAWO video: War deg deg ah OO hadda SOO dhacay : Weerar Ismiidaamin oo lagu qaaday Xarunta CID-da ee Muqdisho iyo rasaas xoogan oo dhaceysa
Waxaa daqiiqado yar kahoe Weerar Ismiidaamin iyo mid loo maleenayo in uu toos yahay lagu qaaday xarunta Dambi baarista booliiska ee CID-da ee magaalada Muqdisho, waxaana xaruntaasi hada laga maqlayaa rasaas xoogan .
Labo qarax oo wax ka yar daqiiqad u dhaxeesay ayaa lagu weeraray xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyada kadib bilowday rasaas xoogan oo qaarkood ay ka dahceyso gudaha xaruntasai.
Dagaalyahano ka tirsan Alshabaab ayaa waxay goor dhow weerar Isqarxin leh la beegsadeen Xarunta Dhexe ee Dembi-baarista Boliska (CID) oo ku taalla agagaarka Isgoyska KM4 iyo Zoope ee magaalladdan Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa sheegay inay Alshabaab adeegsadeen Qaraxyo, ka hor intaysan gudaha CID-da gelin, ka dibna u suura gashey in ay gudaha galaan.
5 qof ayaa la xaqiijiyey in qaraxyadan ku dhinteen 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo khasaaraha uu intaan ka badan karo.
Dad shacab ah oo gaadiid saarnaa, qaarkoodna mooto Bajaaj la socday ayaa ku dhintay qaraxyada, iyadoo ay jiraan dhaawacyo kala duwan oo ka dhashay.
Xarunta la weeraray ee CID-da waxaa ku xiran maxaabiis dambiyo kala duwan loo heesto, waxaa sidoo kale xaruntaasi ay tahay mid mashquul badan, waxa ayna xaruntan kutaala kasoo horjeedka Hotelka Saxafi ee kuyaala agagaarka Isgooska KM-4 ee magaalada Muqdisho.
Talefishinka Al-Jazeera qeybta ingiriiska ayaa baahisay Al-Shabaab inay ka dambeeyeen Weerarkaasi Islamarkaana ay Saraakiil katirsan ay Xaqiijiyeen Shaabaab inay Werarkaas qaadeen – DAAWO:
Sarkaal caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho iyo raggii dilay oo baxsaday
Sarkaal Booliska Somaliya ka tirsanaa, ayaa waxaa fiidnimadii caawa lagu dilay Degmada Kaaraan ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho, ka gadaal markii ay toogasho ku dileen niman bistoolado ku hubeysnaa.
Raggaan, ayaa waxay Cali Caddow Maxamuud oo ka tirsanaa Hogaanka Gaadiidka Booliska ay ku dhex toogteen xaafadda Jamhuuriya, xilli uu dhex socday.
Dadka deegaanka, ayaa waxay sheegeen Sarkaalkaasi in laga toogtay qaybaha sare ee jirkiisa, isla-markaana ay baxsadeen raggii dilay.
Ciidan uu horkacaayo Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Kaaraan oo gaaray goobtii lagu dilay Sarkaalkan, ayaa waxay ka qaadeen meydkiisii, iyagoona geeyay Saldhiga Degmadaasi.
Madasha Wadatashiga Qaran oo bilowga Bisha soo socota Muqdisho ku shiraya
Shir kale ayeey isugu imaan doonaan Xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran, shirkaasi oo looga hadli doono arimaha ku aadan Doorashooyinka la filaayo inay dalka ka dhacaan.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa Wakaalada Wararka SONNA u sheegay in shirkaan uu dhici doono 2-da ilaa 4-ta Bisha August ee fooda inaga soo haysa.
Waxa uu sheegay Shirkaasi inay ka qaybgeli doonaan Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo keeni doona qorshaha ugu dambeeya ee doorashooyinka.
“Shirkaan wuxuu dhacayaa 2-da ilaa 4-ta bisha August, waana shir muhiim ah, waxaa warbixin looga dhagaysan doonaa guddiga Doorashooyinka Qaranka, kuwaas oo sheegaya qorshaha ugu dambeeya ee Doorashooyinka.” Ayuu ku yiri Wasiirka Warfaafinta Wareysiga uu siiyay SONNA.
Wasiir Maareeye ayaa sidoo kale sheegay madaxda Dowladda inay ku adkeysanayaan in Doorashada ay dhaceyso Waqtigeeda, islamarkaana uusan wal wal badan ka taagneyn arimahaasi.
Dowladda Somaliya ayaa sheegaysa in Doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto, inkastoo aysan muuqan Diyaargarow badan oo loogu jiro Doorashada.
Xisbiyada Siyaasada dalka ayaa qaba walaac ku aadan in Dowladda ay sameyso muddo kororsi talada dalka ku aadan.
War deg deg ah: Maamulka Somaliand oo Xukun Xabsi Ah ku riday Sheekh Caan Ka ah Deegaanada Maamulkaasi
Luulyo 30, 2016
Maxkamada Hargeysa ayaa xabsi gaadhaya hal sano iyo lix bilood ku riday Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame (Aadan Sunne).
Sheekh Aadan-Sunne oo muddo saddex bilood ah ku jiray xabsi ku yaala Magaaladda Hargeysa, waxaana xukun ku riday maxakamada Gobolka Maroodi-jeex ay ku Magaaceeb maamulka Somaliand.
Sida lagu warramayana waxaa sheekha lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ahaa; in uu wax ka sheegay albaab ku yaalla xarunta ciidamada Badda ee Magaaladda Hargeysa iyo waliba sameecado laga jar-jaray magaalada.
Luulyo 29, 2016
R/Wasaaraha oo sheegay in Prof. Jawaari kala hadlayo ansixinta Sharciga doorashooyinka
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu kala hadlayo sidii Baarlamaanka uu u meel marin lahaa hindise sharciyeedka doorashada dalka OO ay dowlada weli u SOO gudbinin Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadalkan ayuu Ra’iisul Wasaaruhu ka sheegay munaasabad lagu maamuusayay sanad-guuradii 1aad ee ka soo wareegatay markii la sameeyay Guddiga doorashooyinka oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumaddiisa ay dooneyso in la meel mariyo Hindise sharciyeedka doorashooyinka, , si doorasho xalaal ah dalka uga dhacdo.
“Sharciga doorashooyinka waxaa ku dadaalaynaa in laga gaarsiiyo ka hor inta Baarlamaanka xirmin, walow habka baarlamanaka wax u gudbiyo ay tahay akhrinta 1aad, 2aad iyo 3aad, Guddoomiyaha marka uu yimaado waa ka wada fariisaneyna bal sidii arrintan loo meel marin lahaa, maadaama waqtiga yar yahay”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga sii shaqeeyo qorshaha dalka lagu gaarsiinayo doorashada 2020 ee ah hal qof iyo hal cod, isagoo xusay in Guddiga doorashada ee ay madaxda u tahay Xaliima Ismaaciil (Xaliima Yarey) ay ku casuumi doonaan kulanka soo socota ee Madaxda Madasha Wada-tashiga ay yeelan doonaan.
Fadhiyadii Baarlamaanka ayaa gaabis ku yimid, tan iyo markii Madaxweyne Xasan Sheekh bishii May ee sanakdna uu soo saaray xeer uu ku meel mariyay go’aan ka gaarida doorashooyinka sanadkan ee ay isla gaareen Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran, taasoo keentay in xubnaha Baarlamaanka ku tilmaameen in awoodihii sharciga ahaa ee Baarlamaanka uu la wareego Madaxweynaha.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2016.